चामल संग मेक्सिकन मिश्रण: व्यञ्जनहरु
हाम्रो आधुनिक विश्व, प्रयास र bustle को पूर्ण, कहिलेकाहीँ पूर्ण-fledged उच्च गुणस्तरीय खाना तयार गर्न समय छैन। आखिर, खाना भिटामिन र खनिज समावेश, र उच्च-क्यालोरी हुन छैन गर्नुपर्छ। केही को प्लेट पछि रहन घण्टा कम गर्न अग्रिम केही दिनको लागि तयार छन्। छिटो खाना र सबै पाप को एक धेरै। यस अवस्थामा बाहिर एउटा तरिका हो? स्थिर तरकारी को सहायता गर्न आउनुहोस्।
स्थिर तरकारी मिक्सहरू को लाभ
सबैभन्दा लोकप्रिय को एक मेक्सिकन मिश्रण छ। एक कम क्यालोरी, तर पौष्टिक भोजन - तरकारी मिश्रण। 10 मिनेट - उदाहरणका लागि, मेक्सिकन चामल मिश्रण प्रति 100 एक पकाउने समय G लगभग 150-160 किलो कैलोरी समावेश गर्दछ। अक्सर तपाईं स्थिर तरकारी उपयोगी कुरा समावेश छैन बयान सुन्न सक्नुहुन्छ। यो categorically गलत धारणा छ। आजकल तरकारी जो रोक्छ उत्पादनहरु को बहुमूल्य गुणहरू गायब तेजी चिसो, द्वारा स्थिर छन्।
मुख्य लाभ को एक पनि तयारी समय सफाई तरकारी खर्च गर्न छैन भन्ने तथ्यलाई छ। स्थिर मिश्रण सबै तरकारी खान तयार छन्। त्यहाँ चामल, पनि सबैभन्दा अनुभवहीन पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री प्रबन्धन एक पकवान संग मेक्सिकन मिश्रण पकाउन कसरी लागि धेरै व्यञ्जनहरु छन्। केही सामाग्री वा मसला थप्ने, तपाईं एक पूर्ण बिभिन्न स्वाद व्यञ्जन तपाईं र तपाईंको प्रियजनलाई प्रसन्न हुनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्।
चामल को मेक्सिकन मिश्रण - जो वर्षैभरि महसुस गर्न सकिन्छ धेरै ताजा स्वाद संग सबै भन्दा-गर्न-सजिलो तयार व्यञ्जन, एक। मिश्रण को संरचना विक्रेता बाट विक्रेतालाई फरक हुन सक्छ, तर आधार सधैं गाजर, घण्टी खुर्सानी, प्याज, हरियो सिमी र zucchini समावेश गरिएको छ।
स्थिर तरकारी कसरी चयन गर्ने?
निर्माता उच्च गुणस्तरीय उत्पादन हामीलाई तालिका मा राख्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गरिरहेका छन् थियो। यो पछिल्लो चिसो प्रविधी लागि प्रयोग। तर कसरी सही तरकारी मिक्सहरू चयन गर्न, पकवान साँच्चै सम्भव र एउटै aesthetically खुसी मा उपयोगी थियो?
- तरकारी उपस्थिति जो संकेत पुन चिसो हिउँ र बरफ, मुक्त हुनुपर्छ।
- कट तरकारी प्राकृतिक रंग हुनुपर्छ, नीरस तरकारी गलत तापमान मा एक लामो समय को लागि स्थिर थिए।
- तरकारी फारममा हुनुपर्छ र टुक्रा मा crumble छैन।
को कसरी प्रयोग गर्ने तरकारी मिश्रण?
चामल को मेक्सिकन मिश्रण - एक सार्वभौमिक पकवान, सबै पकाउने विधिहरू लागि उपयुक्त: उसिनेर, stewed, रोस्ट र पनि पाक्नु। मिक्स एक पक्ष पकवान, जो धेरै राम्रो तरिकाले मासु, चिकन र तरकारी संग संयुक्त छ रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, र यो सम्भव छ र एक अलग पकवान, चामल, आलु वा मासु संग मिश्रित रूपमा। तरकारी मिश्रण एक पिज्जा लागि Topping, साथै omelets लागि फिलर रूपमा धेरै राम्रो छ।
एक मिश्रण संग मेक्सिकन व्यञ्जनहरु
यो मेक्सिकन मिश्रण संग भात पकाउन धेरै सजिलो छ। यस नुस्खा धेरै सरल छ। यसको ठूलो साथै तिनीहरूले तरकारी खाना पकाउने को आधारमा फरक व्यञ्जन प्राप्त हुनेछ भन्ने छ।
सजिलो नुस्खा: पहिलो तपाईं चामल को 150 ग्राम फोडा गर्न आवश्यक छ। तरकारी को 200-300 ग्राम पनि पानी मा उसिनेर गर्न सकिँदैन वा धमाकेदार, स्वाद नुन र मसला थप्न। त्यसपछि चामल र तरकारी मिश्रण। पकवान तयार छ! यो विधि sportsmen को धेरै रुचाउनु छ र महिला एक आहार मा छन्।
चामल धेरै तयार गर्न सजिलो र निम्न नुस्खा संग मेक्सिकन मिश्रण: पकाएको सम्म घिउ राख्नु मिश्रण र तलना एक पैन मा, मसाले र सोया सस थप्नुहोस्। यो तयार मिश्रण पकाएको भात खन्याउन, राम्रो मिश्रण र अर्को 5-10 मिनेट स्टोभ मा छोड्नुहोस्। तपाईंलाई समुद्री चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि नै मिश्रण तपाईं पूर्व-तला लसुन झिंगा संग थप्न सक्नुहुन्छ। यो पकवान एक पूर्ण बिभिन्न ध्वनि दिनेछु। तपाईं भू-मध्य खाना को एक स्वाद अनुभव हुनेछ।
तपाईं पनि मेक्सिकन multivarka एक मिश्रण मा चामल पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, लगभग कप चामल मिश्रण को बारेमा 400 G थपिएको छ। यो सबै एक कचौरा हालिदिए छ, पानी, नुन र मरिच थप्नुहोस्। "चित्र" सक्षम र खाना पकाउनु छोड्नुहोस्। 10 मिनेट पछि, क्रीम को 150 ग्राम खन्याउन। सबै हलचल र गरेका सम्म पकाउन। multivarka मा निरन्तर सामग्री निगरानी गर्न कुनै आवश्यकता छैन। पनि, यो आवश्यक छ, अक्सर हलचल, यो mush unpresentable मा तरकारी गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जसको नुस्खा सरल छ र उच्च पाक क्षमता, पनि एक बच्चा शक्ति आवश्यकता छैन मेक्सिकन को एक मिश्रण संग भात पकाउन के बुझ्न सजिलो छ। त्यसैले, आफ्नो फ्रीजर सधैं मिश्रण पैकिंग पनि, त्यसपछि हात लगभग सधैं तयार appetizing पकवान र तपाईं छैन डर सीमा कुनै अप्रत्याशित अतिथि छ।
खट्टा क्रीम मा बीफ कलेजो स्वादिष्ट र चाँडै कसरी खाना पकाउनु?
"जिन्जरब्रेड मानिस": फोटो संग नुस्खा
अब्खाजिया को सबै भन्दा राम्रो राष्ट्रिय पकवान। Abkhaz परम्परा भोजन। अब्खाजिया राष्ट्रिय व्यञ्जन: व्यञ्जनहरु
आनन्द: टर्की Delights नुस्खा
पोर्क को एक स्वादिष्ट आवारागर्दी ~: व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने प्रविधि
प्वालहरू भएको प्यानकेकहरू कसरी Bake गर्न? धेरै embodiments को नुस्खा
उत्तम फ्रेम: तपाईंको हातले कसरी फ्रेम बनाउँदछ
Seabuckthorn: फूल, रोपण र हेरचाह, उपनगर लागि किसिमहरु
एक चोट के हो? विवरण र उपचार को मुख्य प्रकार
ढोका फ्रेम र यसको विधानसभा
प्रार्थना के हो र यो किन आवश्यक छ?
सानो एसयूवी मित्सुबिशी Pajero मिनी
चलचित्र "निजी स्क्रीनिंग": कथाहरू सूची, समीक्षा
वयस्क मा pancreatitis को मुख्य लक्षण
"दया" मा निबंध - यसको लेखन को उच्च नैतिक र विशिष्टता को विषय मा एक निबंध
व्यावसायिक विकास को प्रमाणपत्र: एक नमूना फारम र भर्न नियम
प्यानकेकहरू कसरी खाना पकाउनु?